विराटनगरमा भेटिए डेंगुका बिरामी, डेंगु नियन्त्रणका लागि ८० लाख - Sagarmatha Online News Portal
विराटनगरमा भेटिए डेंगुका बिरामी, डेंगु नियन्त्रणका लागि ८० लाख
विराटनगर । विराटनगरमा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ । विराटनगर महानगरपालिका १ र ३ नम्बर वडामा दुई जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको हो ।
संक्रमितहरुको विराटनगर अस्पताल र नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । धरानमा डेंगुको प्रकोप मोरङ र सुनसरीमा फैलिएको छ । गत वैशाख ३१ गतेबाट फैलिएको डेंगु रोगबाट संक्रमितको संख्या ३ सय ६८ पुगेको छ । मंगलबार मात्र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ८९ बिरामी थपिएको बताइएको छ । डेंगुको संक्रमण इटहरी उपमहानगरपालिका र रामधुनी नगरपालिकामा पनि देखिएको छ ।
केही दिनअघि मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा संक्रमण देखिएको थियो । लगतै पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा पनि भेटिएको थियो । मंगलबार विराटनगरमा दुई जनामा संक्रमण देखिएको हो । विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महासाखाका अधिकृत सुवास नेपालका अनुसार महानगरपालिकाले डेंगु नियन्त्रणकालागि स्प्रे गर्ने र डेंगु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान नस्ट गर्ने काम सुरु गरेको छ । मंगलबार संक्रमण देखिएपछि बुधवार विराटनगर १, २, ३ र १० नम्बर वडामा मालाथिन फगी स्प्रे काम सुरु गरेको उनले बताए ।
डेंगुको संक्रमण फैलिएपछि प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षकै बजेटबाट धरानबाट फैलिएको डेंगु रोग नियन्त्रणकालागि ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरी कार्यन्यनमा पठाउन लागिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
प्रदेश सभाको बैठकमा उठेको जवाफको उत्तर दिने क्रममा उनले डेंगु प्रभाावितको उपचारकालागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताए ।
डेंगु रोग नियन्त्रणमा आवश्यक कदम चालिसकेको बताउँदै उनले संक्रमण फैलिएपछि ५० लाख रुपैयाँ तत्कालै विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
डेंगु रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट संक्रमण फैलने गर्छ । एडिज प्रजातिको लामखुट्टे जोखिपूर्ण हुन्छ । गर्मी एवं वर्षाको समयमा यस्तो लामखुट्टे फैलने भय बढी हुन्छ । त्यसैले डेंगुबाट बच्नु भनेको यस्ता लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नु नै हो । यो लामखुट्टे विहानी पख बढी सक्रिय हुन्छ ।
एडिस लामखुट्टे जमेको पानीमा जन्मने र हुर्कने गर्छ । जस्तो कि, कुवाको पानी, खाल्डा खुल्डीमा जम्मा भएको पानी, नालाको पानी आदि । त्यसैले घर आसपासमा पानी जम्ने ठाउँ हुनुहुँदैन ।
शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु डेंगुको उपचार पद्धती हो । डेंगुको संक्रमण भएको शंका लागेमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी चकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिका साथसाथै खानपान र सही दिनचर्या आवश्यक हुन्छ ।
१. सादा भोजन गर्ने । धेरै नुन भएको खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन ।
२. अनार, गहुँको जमराको रस पिउनुपर्छ ।
३. ताजा मौसमी फल सेवन गर्नुपर्छ ।
४. नरिवल पानी र सफा पानी धेरै मात्रामा पिउनुपर्छ ।
५ भिटामिन सी युक्त फल खानुपर्छ । कागती, सुन्तला, अंगुर, जामुन पर्याप्त मात्रामा सेवन गर्ने ।
६. मेवाको पातको रस बनाएर पिउनुपर्छ ।
Published On: २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार 116पटक हेरिएको